Ifakwe kwi-AZS block
Izitena ze-AI203-SiC-C, ekubhekiswa kuzo njengezitena ze-ASC. Izitena ze-AI203-SiC-C zenziwe nge-corundum edityanisiweyo (okanye i-sintered corundum, i-bauxite clinker ekhethekileyo), i-graphite kunye ne-silicon carbide enekhabhoni esisigxina ngaphezulu kwe-90% -95% njengezona zinto ziphambili ziphambili. Yenziwe ngokongeza i-graphite, i-bauxite, kunye nezongezo, emva kokubethelwa, ukwenza, ukomisa kunye nokudubula okuphezulu. Isitena se-ASC sisebenza kakuhle kakhulu kubushushu obuphezulu kunye ne-anti-oxidation, anti-flaking kunye ne-anti-slag errosion properties, inokumelana nokukhula kwesisombululo esinexesha elide, kwaye inobomi benkonzo ende.
Alumina bubble isitena yenye yezixhobo ultra-high ubushushu izinto okonga umbane. Isebenzisa i-alumina sphere sphere njengezona zinto ziphambili ziphambili kwaye idibanisa nezinye izibophelelo ukucima i-alumina emigodini engenamngxunya kwiziko lobushushu eliphezulu ngo-1750 ℃. Isitena se-alumina bubble sineempawu zokuqhuba kwe-thermal esezantsi, ukulondolozwa kobushushu okuhle, amandla aphezulu okucinezelwa, kwaye sinokusebenza kumaqondo obushushu angaphantsi kwe-1800 ° C. Inokumelana nobushushu obugqwesileyo kunye neepropathi zokugquma ubushushu, kunye nokugcina amandla okugcina.
I-Andalusite yiminerali ye-aluminosilicate, eyinto ekrwada yokwenza izinto ezingafunekiyo kunye ne-porcelain kwiiplagi. Yiminerali eqhelekileyo yenqanaba eliphantsi le-metamorphism ye-thermal, kwaye ihlala ifumaneka kumatye odaka xa unxibelelana nemimandla ye-metamorphic. Yenziwe ikakhulu phantsi kweemeko zokuphakama komhlaba kunye noxinzelelo olusezantsi kumgangatho wobushushu.
I-Andalusite i-crystalar columnar, kwaye icandelo layo lomnqamlezo liphantse lisisikwere. Amakristal e-Andalusite aqokelelene ndawonye kwiimilo zeradial okanye zegranular. Abantu bahlala bebiza i-radial andalusites "ngamatye e-chrysanthemum", nto leyo ethetha ukuba zifana neembumba ze-chrysanthemum.
Ikhalsiyam khabhayithi sisakhi esingaphiliyo, iikristali ezimhlophe, iimveliso zorhwebo ngamaqhuma amnyama-mnyama, kwaye icandelo lomnqamlezo limfusa okanye ngwevu. Isabela ngogonyamelo xa ihlangana namanzi, ivelisa iasithilini kunye nokukhupha ubushushu. Ikhalsiyam khabhayithi yinto ebalulekileyo ekrwada, esetyenziselwa ukuvelisa irhasi yeasithilini. Ikwasetyenziswa nakwi-organic synthesis, i-oxyacetylene welding, njl.njl. Iipropati zomzimba kunye neekhemikhali: I-ore ngumbala omthubi-mdaka okanye mnyama omnyama, kwaye imveliso esulungekileyo yikristale emhlophe (yona ene-CaC2 ephezulu imfusa). Inobuninzi be-2.22 g / cm3 kunye nendawo yokunyibilika ye-2300 ° C (enxulumene nomxholo weCaC2). Iphendula ngokukhawuleza xa idibana namanzi ukuvelisa iasithilini kwaye ikhuphe ubushushu. Indawo yokunyibilika iyatshintsha kunye nomxholo wecalcium khabhayithi owahlukileyo.
Elona candelo le-bauxite yi-alumina, ene-alumina ene-hydrated equkethe ukungcola kwaye luhlobo oluthile lwezimbiwa zomhlaba. Mhlophe okanye mhlophe qhwa, mthubi bumthubi okanye bomvu ngokukhanyayo ngenxa yomxholo wentsimbi. Ubunzima be-3.45g / cm3, ubunzima be-1 ~ 3, opaque kunye ne-brittle. Kunzima kakhulu ukunyibilika. Ingenakunyibilika emanzini, inyibilike kwi-asidi ye-sulfuric kunye nesisombululo se-sodium hydroxide. Ubukhulu becala isetyenziselwa ukunyibilikisa i-aluminium kunye nezinto zokwenza ukuba ziphinde zenziwe.
Ukubumba kwe-bauxite kuyinkimbinkimbi kakhulu, kwaye ligama eliqhelekileyo leentlobo ezahlukeneyo ze-hydrous alumina ore enemithombo eyahlukeneyo yokuma komhlaba. Ezifana ne-boehmite, diaspore kunye ne-gibbsite (Al2O3 · 3H2O); ezinye zenziwe nge-diaspore kunye ne-kaolinite (2SiO2 · Al2O3 · 2H2O); ezinye zenziwe ikakhulu nge-kaolinite kwaye zilandela Ukwanda komxholo we-kaolinite wenza i-bauxite ngokubanzi okanye udongwe lwe-kaolinite. IBauxite yenziwa ngokubanzi yimozulu yemichiza okanye iziphumo zangaphandle. Zimbalwa iicaminerali ezicocekileyo, kwaye zihlala zinezimbiwa ezingcolileyo, ubuncinci okanye ubuncinci beetyuwa, iiminerali zentsimbi, iiminerali zeetitanium kunye neeminerali ezinzima.
I-Chamotte ngumgangatho ophezulu wodongwe owenziwe ngodongwe onzima oveliswe eZibo, kwiPhondo laseShandong, China. Umxholo oqhelekileyo we-Al2O3 we-chamotte ore yi-38%, emva kokubala umxholo we-Al2O3 umalunga ne-44%, kunye ne-Fe2O3 <2%. Ukwenziwa kuzinzile, ukuthungwa kuyafana, ubume buxinene, kwaye eli candelo limile okweqokobhe kwaye limhlophe. Isetyenziselwa ukuvelisa izinto zodongwe ezikumgangatho ophezulu. Ixesha lobuchwephesha yindawo yokuqala yodongwe oluqinileyo, izinto zeekhemikhali eziphambili zi-AL2O3 kunye ne-SiO2, ezihamba kunye nenani elincinci le-Fe2O3 kunye nokulandelwa kwe-Na2O kunye ne-K2O. Eyona izimbiwa - kaolin.
I-chamotte esiyibiza ngokubanzi ibhekisa ku-CALCINED CLAY. . Umxholo we-Al2O3 kwi-chamotte ebalwayo imalunga ne-44%, kwaye umxholo we-Fe2O3 awukho ngaphezulu kwe-2%. Ukwenziwa kuzinzile, ukuthungwa kuyafana, ubume buxinene, kwaye eli candelo limile okweqokobhe.
Imibala eqhelekileyo ye-chamotte emva kokubalwa kobushushu obuphezulu yile: mhlophe emsulwa, grey ukukhanya, mdaka mthubi mthubi, kunye nexabiso elincinci le-brown sheet yetsimbi.
Alumina mqengqeleki yodongwe
I-ceramic roller yinto edityanisiweyo eyenziwe ngomzimba we-porcelain, isimboli, ishafti, kunye nentsimbi yokutywina ye-labyrinth. I-quartz roller ceramic roller yeyona nto iphambili kwisithando somlilo seglasi, kwaye isetyenziselwa ukuphatha nokuhambisa iglasi kwisithando somlilo seglasi. I-Quartz roller yodongwe isebenzisa ubumsulwa obuphezulu obuxutywe nesilica njengezinto ezingavunyelwanga, ngoxinano oluphezulu kakhulu, amandla aphezulu, ukwanda okuphantsi kwe-thermal, uzinzo olomeleleyo lokutshiswa kwe-thermal, ukuchaneka okuphezulu, akukho deformation kubushushu obuphezulu, ubomi benkonzo ende, kwaye akukho kungcoliseka kwiglasi.
Ibhola yodongwe yenziwe nge-AL2O3, i-kaolin, i-synthetic aggregate, i-mullite crystal kunye nezinye izinto. Ngokweendlela zokuqengqeleka nezokucofa zokwenza iindlela. Imveliso inokumelana nokushisa okuphezulu, ukuxhatshazwa kwe-corrosion, ukuxinana okuphezulu, ukuxhathisa okuphantsi kwe-thermal, amandla aphezulu, ukuqhuba kakuhle kwe-thermal, ukumelana ne-oxidation, ukuxhathisa kwe-slag enamandla, ukuqhuba kwe-thermal enkulu kunye namandla okushisa, ukugcina ukushisa okuphezulu; uzinzo olululo lwe-thermal, akukho lula ukutshintsha ubushushu Izinto eziluncedo njengokuqhekeka. Indawo engaphezulu inokufikelela kwi-240m2 / m3. Xa zisetyenziswa, iibhola ezininzi ezincinci zahlulahlula ukuhamba komoya kwimilanjana emincinci kakhulu. Xa ukuhamba komoya kungena emzimbeni wokugcina ubushushu, kuyenziwa isiphithiphithi esomeleleyo, esigqobhoza kakuhle umaleko womzimba wokugcina ubushushu, kwaye kuba ubukhulu bebhola buncinci, ukuqhuba irediyasi encinci, ukumelana okuncinci kwe-thermal, ukuxinana okuphezulu, kunye nokulunga ukuqhuba kwe-thermal, ke iyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zokurhoxa rhoqo kunye nokukhawulezisa ukutshisa okutsha.
Izinto zokwambathisa ezingasasazekiyo
Ukufakelwa kwezinto ezinqabileyo ezinokubakho kubuninzi bokukhanya, ukungahambi kakuhle kwe-thermal, amandla aphezulu, ukuqina komoya okufanayo, kwaye ziyamelana neeacidi kunye neealkali. Kufanelekile ukuba umzimba weziko, udonga lomlilo kunye nophahla lomlilo lwezixhobo ezishushu eziphakathi nezisezantsi. Emva kokuphoswa esizeni, umaleko wokugquma uphelele kwaye ukusebenza kwe-insulation kuyonyuswa. Isetyenziswa kwizitishi ezahlukeneyo zamandla okubilisa kunye neziko lokushishina. Ukugquma kobushushu kunye nokugcina amandla.
Ngodaka eliyinjubaqa iqulathe ngumgubo eliyinjubaqa, i-binder kunye nomxube. Phantse zonke izinto ezingafunekiyo ezingafunekiyo zinokwenziwa zibe ngumgubo osetyenziselwa ukulungisa udaka olubonakalisayo. Udongwe oluqhelekileyo olwenziwe ngodongwe olwenziwe ngokudibanisa umgubo wekhonkrithi kunye nesixa esifanelekileyo sodongwe lweplastikhi njengesibopheleli kunye neplastizer ebizwa ngokuba ludongwe oluqhelekileyo lokuthintela, olunamandla asezantsi kubushushu begumbi, kwaye amandla aphezulu akhiwa ngokudityaniswa kweceramic kumaqondo aphezulu obushushu. Udongwe olwenziwe ngodibaniso olunemichiza, olusebenzisa izixhobo zokubopha umoya, ezomeleleyo zomoya okanye ezomeleleyo njenge-arhente yokubopha, ivelisa indlela ethile yokusabela kwaye iqinise ngaphambi kokuba ibe sezantsi kuneqondo lobushushu le-ceramic.